TSY HISY FIFIDIANANA EO RAHA TSY TONGA ETO NY FILOHA RAVALOMANANA – MyDago.com aime Madagascar
Tsy hisy fifidianana izany amin’ny taona 2013 hoy ny Ct Sazalahy Tsianihy avy any Androy androany teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka raha tsy tonga eto ny filoha Ravalomanana Marc ary milatsaka hofidiana. Tsy voafehin’ny tetezamita tarihin’ny fat hoy izy ny tsy fandriampahalemana manerana ny Nosy. Raha ny any Atsimo dia efa vaky tanteraka ny ady an-trano. Mitombo ny asa dahalo. Ny fianakaviana hoy Tsianihy vonoin’ny mpitandro filaminana. Ireo fianakaviana ireo indray no lasa manampy ny dahalo ary mamono ireo voalaza fa nandoro ny tranony izay nodoran’ny dahalo. Dikan’izany hoy izy dia ny mpandoro trano no mitombo isa. Nataon’izy ireo mihitsy izay tsy hampisy trano sy sakafo any an-toerana. Mandoro trano sy mamono zaza amam-behivavy ny mpitandro filaminana. Izany zava-mitranga izany hoy ity olomboantendry avy any Androy ity dia tsy mijanona fa mitombo isa. Mety hiakatra eto Antananarivo hoy izy io asa dahalo io. Efa mandeha ny resaka hoe avy aty Antananarivo ireo mpitandro filaminana namono olona ireo. Ny taksiborosy hoy Tsianihy dia tsy sahy mandeha amin’ny hariva satria tsy maintsy voatafika. Tsy misy fitondrana adala tahaka ity hoy izy, fa ny vahoaka no sahirana. Mahakasika ny fanisam-bahoaka dia nambarany fa any amin’ny faritra dia mitsoaka ny mpampianatra. Iza hoy Tsianihy no hanao fanisam-bahoaka amin’izany. Angamba raha atao ny fifidianana ka milatsaka i Remenabila any Atsimo dia lany. Noho ny tahotry ny olona no mahalany azy. Tsy misy fifidianana teto hoy izy ka ny filoha Ravalomanana Marc no mbola filoham-pirenena. Noho ny fahatsapan’ny rehetra fa ianjadian’ny asa dahalo, ary voahelingelina ny asa fivelomany. Mieritreritra ny fat fa nitsoaka ny prezidà tamin’ireny fotoana ireny. Tsy marina izany hoy Tsianihy, fa fahendrena no nataony ka nikisaka moramora izy, fa tsy namono ny malagasy. Ny Ct Rarison Hilarion kosa dia nanambara fa matoa mbola mijoro isika dia ho an’i dada. Hampitovian’ny Rajoelina amin’ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka hoy izy ny maha filohan’ny tetezamita azy. Izay no mahatonga antsika ho kivy satria ny tetezamita dia mampandeha ny raharaham-pirenena sy hanao fifidianana. Tsy misy tetezamita haharitra dimy taona izany hoy Hilarion fa adalana ity misy ity. Zarany ireo aza ohatry ny filoha Obama ka handany manda iray izy ireo. Ny zavamisy any Fianarantsoa hoy izy dia tsy nomena ny karaman’ireo mpiasan’ny kaomina fito any an-toerana. Rehefa tsy hanome dia miala i Pety fa tsy mety aminao io. Efa tsy mankasitraka an’i Pety, Rajoelina ka tsy sahiny ny manala azy dia tsy omena ny karaman’ny mpiasan’ny kaomina. Mahakasika ny fifidianana dia nambarany fa ny sehatra iraisam-pirenena tsy mankasitraka io fifidianana io raha tsy tonga eto i dada. Ny anay tsotra hoy izy, ny tondrozotra no nametraka ny andrim-panjakana ary voasoratra ao ny fanokafana ny radio nakatona, mivoaka ny gadra politika sivily sy miaramila, mody ireo sesi-tany politika rehetra, ary atao ny fifidianana malalaka.
Auteur Solo Razafy*Publié le 7 novembre 2012 7 novembre 2012 Catégories Politique
4 pensées sur “TSY HISY FIFIDIANANA EO RAHA TSY TONGA ETO NY FILOHA RAVALOMANANA”
Izany dia marina, fa dia ahoana ny tohiny ? Ho vitan’ny fanambaràna lava izao ve ity raharaha ity ry zareo an ?
AVELA HANJÀKA MANDRITRY NY FIRY TAONA IREO JIOLAHY IREO ?? IANAREO CT, CST ARY MINISTRA VOATENDRY FA TSY NOFIDIANA MOA IZANY DIA AHOANA KOA ?
MANDRY NY SALANITRA ?
7 novembre 2012 à 18 h 26 min
Aza kivy re ry Sahondra Vololona fa efa kely sisa ê ! Tena miaraka tsara kosa aloha ny fikopahana sy ny akanjon-driko ê !
– Ny firaisanben’ny Afikana( U.A) miaraka amin’ny sampan’ny firenena mikambana mikarakara ny fifindra-monina ( haut-commissariat des réfugiés) dia tokony hidina an-tsehatra ary handinika io tranga any Atsimo io:
a./ Inona ny olana? Vaky ny ady antrano:miaramila sy ny mponina no mifandrafy.
b./ Inona no tanjona? Hampiverina ny fifampitokisana nisy eo amin’ny tafika sy ny mponina any an-toerana
c./ Amin’ny fomba ahoana? Tsy maintsy avahana ny « dahalo » sy ny « tsy dahalo ».
d./ Ahoana ny fanatanterahana izany? Amin’ny alalan’ny « angidina » (hélicoptères) nalaina avy tany Belzika sy fanaovana lisitra ny dahalo.
e./ Inona no fanarahana atao? Tsiponina tsirairay ireo fiadiana eo am-pelatanan’ny « dahalo » ary ampianarana sy ampiana amin’ny fiompiana ny zatovo ao-an-toerana izay hiarahan’ny (UNHCR, UNESCO,A.U,FAO,ministry ny mponina malagasy) mamolavola.
Précédent Article précédent : LERIVA MANAHIRANA : MILA MAHERY ISIKA
Suivant Article suivant : Lieutenant Colonel Charles Andrianasoavina : « Haja Resampa a promis de nous octroyer 100 000 euros à condition que je ne divulguerai pas des secrets sur le massacre du 07 Fevrier 2009 »